SJSZ usoro conical twin-screw extruder bụ ụdị dị mma maka ụdị ntụ ntụ PVC niile sitere na ụdị akụrụngwa pụrụ iche, dakọtara na nke kwekọrọ ekwekọ, extrusion die, injin inyeaka, ntụ ntụ PVC nwere ike mee ozugbo ịpịpụta ihe nwere ụdị pụrụ iche, efere, ọkpọkọ, mpempe oghere, ihe nkiri, wdg,
Ojiji na Atụmatụ
SJSZ usoro conical twin-screw extruder bụ ụdị dị mma maka ụdị ntụ ntụ PVC niile sitere na ụdị akụrụngwa pụrụ iche, dakọtara na nke kwekọrọ ekwekọ, extrusion die, injin inyeaka, ntụ ntụ PVC nwere ike mee ozugbo ịpịpụta ihe nwere ụdị pụrụ iche, efere, paịpụ, mpempe akwụkwọ oghere, ihe nkiri, wdg, nwekwara ike mezue maka ụdị mgbanwe plastik niile wee mee ti.The iji ihe pụrụ iche nke ihe nrụpụta gbọmgbọm, isi moto nwere ike họrọ dc ma ọ bụ ac moto; Inye nri mmanye mmanye, sistemụ nkesa torque dị elu na-arụ ọrụ nke ọma. Ngwa njikwa okpomọkụ nke gbọmgbọm na njikwa njikwa akpaka, iji hụ na njikwa ziri ezi nke okpomọkụ nke teknụzụ ihe; Sistemụ jụrụ oyi nke a na -eji onye ofufe jụrụ oyi; Ngwa nwere ọtụtụ ọrụ mkpu, mkpu nkebi nkewa, ọ dị mfe ịrụzi na ndozi; Ejiri ngwaọrụ iyuzucha oghere na ngwaọrụ nchedo oke ibu dị ugbu a.
SJSZ usoro conical twin screws extruder bụ otu ụdị akụrụngwa pụrụ iche nke dabara maka ịwụnye ntụ ntụ PVC n'ụdị dị iche iche. N'ikwekọ na kposara ya, extrusion na -anwụ, na -agbada, ọ nwere ike wepu ntụ ntụ PVC n'ime profaịlụ, efere, ụdị oghere, mpempe akwụkwọ, ihe nkiri wdg.
Ọdịdị nke kposara na gbọmgbọm na -ewere atụmatụ pụrụ iche. Onye na -enye nri na -anabata ihe inye nri mmanye. Ọdịdị dị elu nke onye na -ebelata ihe nkesa na nkesa yana sistemụ. Barrel igwe na -ajụ oyi site na onye na -akwado ya n'ike. Ejiri ngwa eletriki arụ ọrụ ọtụtụ mkpu wee nye mkpu mkpu iche. N'ihi ya, ọ na -enye ohere maka nyocha na mmezi. Igwe eji amịpụta ihe nwere akụrụngwa akụrụngwa na -echekwa ihe mkpuchi kposara.
Draịvụ nke ịghasa cone okpukpu abụọ na otu ịghasa na -anabata teknụzụ ntụgharị AC ugboro ugboro, nke nwere ike imeghari maka teknụzụ dị iche iche chọrọ.
Ịghasa max ọsọ (rpm)
Ụgbọ ala na -akwọ ụgbọala (km)
Ọdịdị etiti (mm)
iyuzucha agụụ akụrụngwa na -echebe kposara nche.
Nke gara aga: Single ịghasa Plastic Extruder
Osote: SPC flooring Production Line
Igwe na -apụ apụ
Ndepụta nhazi na ntinye ihe igwe 800
Nweta Wpc, Line Wepụ profaịlụ Wpc, Na -akụpịa igwe ihe, Pelletizer onye na -eme ihe nkiri, Onye Wpc Extruder, Onye na -eri nri na -akwụ ọtọ,